Mgbe ọ bụla okpomọkụ dara n'okpuru oyi na iru mmiri dị elu, ọnụ ụzọ ụgbọ ala m ga-ajụ oyi n'ezie. N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, ozugbo ị mepere ụzọ, ị gaghị emechi ya. Mgbe ọtụtụ oge dị egwu mechiri ọnụ ụzọ onye ọkwọ ụgbọala m n'ụzọ dị egwu, ụlọ ahịa m zụtara ụgbọ ala ahụ jụrụ ịrụ ọrụ na ya n'efu. Elere m onye nnọchi anya anya nke ukwuu wee gwa ya na ọ bụ edozighi edozi karịrị afọ. Onye njikwa ahụ jụrụ arịrịọ m ma kwuo na ha emeela ncheta kwa ihe Ford chọrọ ma malite ịmalite ịgba m ụgwọ oge ọ bụla m webatara ụgbọ ala ahụ.
N’uwa mbelata ego na ngwongwo a na-ewepu ngwa ngwa, ekwenyere m na azụmaahịa echefuru uru onye ahịa na-eguzosi ike n’ihe bara. Kwa afọ, ana m enyere ndị azụmaahịa aka ịchụpụkwu ụzọ na nnweta ngwaahịa na ọrụ ha. Mgbe ha na-ajụ m ihe ha nwere ike ịme karịa, ọ fọrọ nke nta ka m na-amalite ịjụ ha gbasara njide na iguzosi ike n'ihe ha. Ọ bụụrụ m onye nzuzu na ụlọ ọrụ ga-emefu narị kwuru narị ma ọ bụ puku kwuru puku iji nweta ndị ahịa, mana ha ga-agọnahụ ha ahụmịhe ndị ahịa nke nwere ike ịbe ọkara nke nke ahụ.
Ọbụna dịka ụlọ ọrụ, m na-arụ ọrụ na usoro njigide m. Mgbe m nwere ụfọdụ ndị ọrụ ntụgharị afọ a, atụfuru m atụmanya ụfọdụ na ndị ahịa. Tupu ndị ahịa ahụ funahụ m, ezutere m ha, belata ego nkwekọrịta ha, ma nye nhọrọ maka otu anyị nwere ike isi rụzuo ọrụ ahụ. Amaara m na o siri ike inweta ntụkwasị obi nke onye ahịa yana mgbe ọ dị egwu, amaara m na m kwesịrị ịrịgo ma gbalịa ime ya. Ọ naghị arụ ọrụ oge ọ bụla, mana ọ ka mma karịa ịchụpụ na ịtụgharị ndị ahịa aka ekpe na aka nri.